ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | CUNMAC Vietnam
1. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် စုဆောင်းခြင်း-
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် အက်ပ်လီကေးရှင်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုအချို့ကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုရန်၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ (အမည်အပြည့်အစုံ၊ ဆက်သွယ်ရန်နံပါတ်၊ အီးမေးလ်…) ဖြင့် စာရင်းသွင်းရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ကြေညာထားသော အချက်အလက်အားလုံးသည် တိကျမှုနှင့် တရား၀င်ကြောင်း သေချာစေရမည်ဖြစ်ပြီး၊ CUNMAC သည် ကြေညာထားသော အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တာဝန်အားလုံးအတွက် တာဝန်မရှိပါ။
သင်ကြည့်ရှုသည့် စာမျက်နှာအရေအတွက်၊ သင်နှိပ်လိုက်သည့် လင့်ခ်နံပါတ်နှင့် cunmac.com သို့ ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် အခြားအချက်အလက်များ အပါအဝင် လည်ပတ်မှုအရေအတွက်အကြောင်း အချက်အလက်များကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။ သင် cunmac.com သို့ဝင်ရောက်သည့်အခါတိုင်း သင်အသုံးပြုသည့်ဘရောက်ဆာအချက်အလက်များကိုလည်း စုဆောင်းပါသည်- IP လိပ်စာ၊ ဘရောက်ဆာအမျိုးအစား၊ အသုံးပြုသည့်ဘာသာစကား၊ အချိန်နှင့် လိပ်စာများအပါအဝင် ဘရောင်ဇာမှဝင်ရောက်သည်။
သင်သည် အခြားဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများ CUNMAC သို့ အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပါက သို့မဟုတ် အခြားနည်းအားဖြင့် အဆိုပါ ဆက်သွယ်ရေးအချက်အလက်များသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သို့မဟုတ် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ဆက်နွှယ်မှုမရှိပါက အဆိုပါဆက်သွယ်မှုများကို လျှို့ဝှက်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် သီးသန့်မဟုတ်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
ဤဝဘ်ဆိုက်တွင် သင်ပေးသည့် တုံ့ပြန်ချက်မှန်သမျှသည် လျှို့ဝှက်မဟုတ်ဟု မှတ်ယူပါမည်။ သင့်အား မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို ငွေမပေးဘဲ CUNMAC ကို အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သင်အတည်ပြုပါသည်။
2. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်း-
CUNMAC သည် သင်၏ privacy ကို လေးစားရန် ကတိပြုပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို မဖော်ပြဘဲ ဤဝဘ်ဆိုက်၏ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ CUNMAC သည် ၎င်း၏အကြောင်းအရာအသုံးပြုမှုနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်လာမှုကို တိုင်းတာရန်အတွက် ဝဘ်ဘရောက်ဆာရွေးချယ်မှုများ၊ လည်ပတ်မှုများကဲ့သို့သော ဤဝဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်သူများနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမဟုတ်သောအချက်အလက်များကို စုဆောင်းပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်မှတဆင့် စုဆောင်းရရှိထားသော အချက်အလက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီလိမ့်မည်-
CUNMAC ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူသည့်အခါ သုံးစွဲသူများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှု။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ရှိ ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို သုံးစွဲသူများအား ပေးဆောင်ပါ။
ဝဘ်ဆိုဒ်၏ အကြောင်းအရာနှင့် အင်တာဖေ့စ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အဆင့်မြှင့်ပါ။
ဤဝဘ်ဆိုက်သို့ ပေးအပ်ထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်အားလုံးကို လျှို့ဝှက်ဟု မှတ်ယူထားပြီး သုံးစွဲသူမှ အတိအလင်း တောင်းဆိုထားသည့် ထုတ်ကုန်/ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ဘဲ မည်သည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းကိုမဆို ရောင်းချခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးပေးမည်မဟုတ်ပါ။ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာ သင့်ထံမှ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် သုံးသပ်ချက်များအတွက် တောင်းဆိုမှုများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
သင်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အနာဂတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပုံအား အချိန်မရွေးပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပါ။
3. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို မျှဝေခြင်း-
ဤမူဝါဒတွင်ဖော်ပြထားသည့် “ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်း” ကိစ္စရပ်များမှလွဲ၍ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ထုတ်မပြောရန် ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။
အချို့သောကိစ္စများတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေးကွက်သုတေသနပရောဂျက်များလုပ်ဆောင်ရန် သီးခြားလွတ်လပ်သောယူနစ်ကို ငှားရမ်းနိုင်ပြီး ပရောဂျက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် သင့်အချက်အလက်များကို ဤယူနစ်သို့ ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤတတိယပါတီသည် ပရောဂျက်ကိုပြီးမြောက်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့မှပေးထားသည့် အချက်အလက်များကိုသာ အသုံးပြုခွင့်ရှိသည့် လျှို့ဝှက်ရေးသဘောတူညီချက်ဖြင့် ချည်နှောင်မည်ဖြစ်သည်။
အောက်ပါကိစ္စများတွင် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖော် သို့မဟုတ် ပေးဆောင်နိုင်သည်- (က) ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများ၏ တောင်းဆိုချက်အရ၊ (ခ) ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်အကျိုးစီးပွားများကို ဥပဒေရှေ့မှောက်တွင် ကာကွယ်ပေးနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည့်ကိစ္စများတွင်၊ (ဂ) အရေးပေါ်အခြေအနေများနှင့် CUNMAC အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုအခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
4. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ၏ လျှို့ဝှက်ချက်-
သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို တင်သွင်းသည့်အခါတွင်၊ သင်သည် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော စည်းကမ်းချက်များကို သဘောတူရာရောက်သည်၊ CUNMAC သည် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးကို ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းဖြင့် ကာကွယ်ပေးရန် ကတိပြုပါသည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် ဤလမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာရန် CUNMAC မှ အကြံပြုထားသည်၊
သင်၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့် စကားဝှက်ကို မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်အား ထုတ်ဖော်မပြပါနှင့်၊ ၎င်းကို လူတိုင်းသိရှိနိုင်ပြီး မြင်နိုင်သည့်နေရာတွင် မရေးပါနှင့် သို့မဟုတ် အသုံးမပြုပါနှင့်။
စကားဝှက်ကို ရွေးချယ်သည့်အခါ၊ အမည်အပြည့်အစုံ၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် မှတ်မိနိုင်သော အက္ခရာအချို့၊ သင့်အမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ ဖုန်းနံပါတ်ကဲ့သို့သော အလွယ်တကူ သတ်မှတ်နိုင်သော အချက်အလက်များကို မရွေးချယ်သင့်ပါ။
အချိန်တိုအတွင်းပင် ကွန်ပြူတာမှ ထွက်သည့်အခါ စနစ်နှင့် ဘရောက်ဆာမှ ထွက်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် လူအများအပြားနှင့် ဘုံကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုပါက၊ သင်သည် ထွက်သင့်သည် သို့မဟုတ် ဖွင့်ထားသော ဝဘ်ဆိုက်ဝင်းဒိုးများအားလုံးမှ ထွက်သင့်သည်။
စကားဝှက်ကို ဖော်ထုတ်ထားသည်ဟု သံသယရှိပါက၊ လိုအပ်ပါက သင်ချက်ချင်း အကြောင်းကြားပြီး CUNMAC ထံ အကူအညီတောင်းခံပါ။
သင့်ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် တမင်ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ သင့်အကောင့် သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဖြင့် တရားမဝင်သော လွှဲပြောင်းမှုများ သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မှုများတွင်၊ ထိုကဲ့သို့သော လွှဲပြောင်းမှုများလုပ်ဆောင်သည့်အခါတွင် သင်သည် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် တာဝန်ခံမှုအားလုံးကို ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း CUNMAC မှ နားလည်ပါသည်။
5. သင့်ဒေတာကို ကျွန်ုပ်တို့ သိမ်းဆည်းနည်းနှင့် ကာကွယ်နည်း
6. သင့်ထံ ဆက်သွယ်နိုင်သော ကိစ္စများ
အကယ်၍ သင်သည် လက်ရှိ CUNMAC ဖောက်သည်ဖြစ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များအကြောင်း သင့်အား အသိပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ (အီးမေးလ် သို့မဟုတ် ဖုန်းအပါအဝင်) သင့်ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ရှိပြီးသား ဖောက်သည်မဟုတ်ပါက၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို သဘောတူညီမှု မရရှိခဲ့ပါက နောင်တွင် သင့်ထံ ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်သွယ်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအခွင့်အလမ်းများအကြောင်း (အီးမေးလ် သို့မဟုတ် ဖုန်းဖြင့်) သင့်ထံ ဆက်သွယ်လိုပါက ဆက်သွယ်ရန်/ပြန်လည်သုံးသပ်မှုပုံစံကို ရယူပါ။ cs@cunmac.com လိပ်စာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့် အနာဂတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဆက်သွယ်မှုများကို အချိန်မရွေး ငြင်းပယ်နိုင်ပါသည်။
ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို ချိုးဖောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားချက်တစ်ခုရှိပါက cs@cunmac.com တွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုင်ကြားချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများအားလုံးကို လိုက်နာကြောင်း သေချာစေပါသည်။ သင့်တိုင်ကြားချက်ကို လက်ခံရရှိပြီး ရက် 30 အတွင်း သင့်အား ဤသုံးသပ်ချက်၏ရလဒ်များကို အသိပေးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါမည်။